Archives Nationales – Page 2
FIARAHA-MIFALIN’NY FOIBEN’NY ARISIVAM-PIRENENA TAO AMIN’NY ESPACE NY AMORON’IRIHITRA (ARIVONIMAMO)NY ZOMA 23 MARTSA 2018
27 mars 2018 événement
Nisinda kely nihataka ny renivohitra ny mpiasan’ny Foiben’ny Arisivam-Pirenena ny Zoma 23 martsa 2018 lasa teo.
Nandresy lahatra azy ireo tamin’izany ny Espace Ny Amoron’Irihitra any Arivonimamo.
Espace Ny Amoron’Irihitra Arivonimamo
Zoma 23 martsa 2018
Espace Ny Amoron’Irihitra
Sady fialamboly no fifampiarahabana tratry ny taona rahateo no foto-dia satria tsy mbola nisy ny fotoana nanaovana izany teo aloha. Aleo tratra aoriana toy izao toy izay tsy misy mihitsy e!
Ny Talen’ny Arisivam-Pirenena miaraka amin’ireo mpiara-miasa aminy
Espace Ny Amoron’Irihitra, Zoma 23 martsa 2018
Afa-po ny rehetra. Faly sy mavitrika fa nahazo hery vaovao hiatrehana indray ny asa maro miandry ao am-piasana.